Warbixinta OCHA ee Somalia - BBC News Somali
Warbixinta OCHA ee Somalia
7 Agoosto 2010
Image caption qoys barkacayaal ah
Xaaladda bani'aadminimo ee Somalia, ayaa hey'adda xidhiidhinta arrimaha gargaarka iyo banii'aadminnimada ee Somalia, OCHA, ay ku tilmaantay warbixinteedii ugu dambaysey, inay tahay mid ka sii daraysa meelo badan
Image caption tarxiilinta barakacayaasha koonfurta
Warbixintu waxay tusaale u soo qaadatay Puntland, gaar ahaanna magaalaa Bosasso, oo laga tarxiiliyey dad kun qof ku dhawdhaw oo badankoodu u dhashay koonfurta Somalia, ahaana dadkii ka soo qaxay ee dagaallada koonfurtu soo bara kiciyeen. Dadkaasina waxa dib loogu celiyey degaannada koonfureed ee Galkacyo.
Puntland waxay sheegatay inay tallaabooyinkani u qaadayso sababo la xidhiidha xagga sugidda nabadgelyada gudaha, ka dib markii la ogaaday in dhibaatooyin badan iyo dilal kaga imanaaa kooxaha xag jira ee ka dagaallamaya koonfurta Somalia, in loogu soo dhex dhuunto dadkan soo barakacay.
Laakiin he'adda UNHCR ee qaramada Midoobey u qaabilsan qaxootiga ayaa muujisay walaaca ay ka qabto dhibaatooyinka soo gaadhi kara barakacayaashaasi dib loogu celinayo degaannadii ay ka soo qaxeen ee dagaallada iyo deganaansho la'aanta, waxayna UNHCR ay ugu baaqday maamulka Puntland inay joojiyaan tarxiilka noocan ah
Image caption dabka xerooyinka qaxootiga
Dhinaca kale, warbixinta OCHA waxa kale oo ay so qaadday xaaladda la soo gudbonaatay barakacayaal dhawr kun ah oo xerooyinkii ay ku jireen ay basbeeleen, ka dib marki dab uu qabsaday xerooyinkaasi, dabkaasi oo aad u hura, una faafa xilligani ay jiraan dabaylaha xagaagu
Xerooyin ku yaalla agagaarka magaalada Bosasso ayaa wabixintu ay sheegtay in toddobaadkii aynnu soo dhaafnay ay ku guryo beeleen ilaa kun qoys oo qaxooti ahaa, dababkaasi kacay awgood. Koonfurta Galkacyo ayaa waxa iyana ku gubtey ilaa 35 guri-qoys.
OCHA waxa sheegtay in UNHCR ay u qaybisay barkacayaashaasi Bosasso ee dabku baabiiyey, taakulayn iskugu jirta baco iyo gogol, iyo biyo-dhaamis, lana gaadhsiiyy ilaa 1450 qoys (8000 oo qof)
Image caption dhaawaca rayidka
Warbixinta OCHA waxa kale oo ay ka hadashay dagaallada koonfurta iyo barakaca, gaar ahaanna duqaymihii ka dhacay magaalaa Muqdishu toddobaadyadii dhawaa oo ay ku dhinteen ilaa 40 qof oo rayid ah, in badan oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Warbixintu waxay sheegtay in laga soo bilaabo bishii July ee sanadkani, in dad ka badan 26 kun qof ay ku barakaceen oo ay ka qaxeen magaalada Muqdishu.
Dhinaca kale, dagaallo kale oo la sheegay inay ka dhaceen bishan afarteedii, degaanno ka tirsan gobolka Bakool, ayaa waxa ka yimid khasaare xagga dadweynaha ah oo lahaa dhimasho iyo barakac intaba. Dagaalladaasi oo la sheegay inay u dhaxeeyeen ururka al_Shabaa iyo ciidamo taageersan dawlada ku-meel-gaadhka ah iyo itoobkiyaan caawinaya, waxa la sheegay inay ka dhaceen degaanka Yeed oo ka tirsan degmada Rabdhuurre.
Warbixinta OCHA waxay intaasi ku dartay in bishii hore dhamaadkeedii, hey'adaha gargaarku ay dhamaystireen qorshaha garagaarka banii'aadminnimad ee Somalia, kalana qoondeeyeen gargaar dhan ilaa 20 milyan oo dollar, kuwaasi oo la kala gelinayo mashaariic iskugu jirta xaga nafaqada, caafimaadka, beeraha iyo xolaha, iyo adegyada kale ee asaasiga ah.
Waxa kale oo warbixintu ay sheegtay in kulannadii wadatashiga Hey'adaha iyo dhinaca kale Somalida, in bishan gudaheeda lagu kala qaban doono magaalooyinka Hargeysa, Garowe, iyo Nairobi.